September 2021 - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com September 2021 - खबर प्रवाह
राशिफल : २०७८ साल आश्विन १५ गते शुक्रबारको निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
बि.स.२०७८ साल असोज १५ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर १ तारीख आश्विन कृष्णपक्ष दशमी तिथी तिष्य नक्षत्र शिव योग वणिज करण चन्द्रमा कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा उत्पात योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु फर्पिङमा हरिशंकर यात्रा दशमी श्राद्ध अन्तराष्ट्र्यि वृद्ध(वृद्धा दिवस मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सभासम्मेलन […]
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महंगो भयो, पूर्ण समानुपातिकमा जाऊँ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा विघटनका पछाडि माओवादीले ल्याएको परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। माओवादीलाई घेरा हाल्ने र सिद्धयाउने रणनीतिअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनले बताए। माओवादी रहँदासम्म परिवर्तनका एजेण्डा कायमै रहने भयका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिए पनि आफूहरुले त्यसलाई परास्त गरेको उनले उल्लेख […]
सर्वेन्द्र खनाल र बादलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । एक व्यक्तिको इन्काउन्टर घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्का’न्टर प्रकरणमा यस्तो आदेश भएको हो । ‘इन्का’उन्टर’मा मारिएका पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता […]
दश भाइलाई प्रचण्डको दनक- हिजो ओलीलाई हटाउन हस्ताक्षर गरेको होइन ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेका ‘दश भाइ’ले केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका छन् । अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले हिजो ओलीलाई कारवाही गर्न हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै अहिले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेको बताए । ‘अस्तिसम्म त उहाँहरूले मलाई केपी षड्यन्त्रकारी नै हो हो, तानाशाह नै हो […]
गोकुल बास्कोटाको क्यारिकेचर गर्दै प्रचण्डले भने- हामीलाई हेप्न पाइँदैन, उसलाई नै हेप्ने हो
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको नक्कल गर्दै आफूहरूलाई हेप्न नपाइने बताएको छन् । अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब गाउँ-गाउँबाट जाली फटाहालाई वाईसीएल र अखिल क्रान्तिकारीले लखेट्नुपर्ने बताए । गोकुल बास्कोटाको नक्कल गर्दै प्रचण्डले भने, ‘एकजना मन्त्री थिए नि,हेप्नी ? भन्ने । हेप्ने त हेप्ने नै हो […]
गाउँगाँउमा केपी आतंक छ,आफ्नैले प्रचण्ड केही गर्दैन भन्दै हिँडे : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा केपी ओली आतङ्क बढेको बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले देशमा ओली, कमल थापा जस्ता नेताले जनतामा आतङ्क फैलाएको टिप्पणी गरे । माओवादी र वाईसीएलको आतङ्क छ भन्ने भ्रम अन्त्य भएको […]
‘हिजो म’र्न तयार हामी आज पद, पैसा र मन्त्री नपाउँदा रुन थाल्यौँ’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरुको क्रान्तिकारी चरित्र स्खलित हुँदै गएको बताएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार काठमाडौंमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन्। ‘हामीले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै मौलिक क्रान्ति गर्‍यौँ। तर अहिले हाम्रो क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास आएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो क्रान्तिकारी कार्यशैलीमा स्खलन भएको छ। हामी विस्तारै विस्तारै […]
माधव नेपालको पार्टी कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चाजस्तो : अधिकारी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चा जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा सांसद अधिकारीले नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैधानिक पार्टी भएको जिकिर गरे । उनले नेकपा एमाले कानून र संविधानको रक्षाका लागि दृढताका साथ […]
एमालेको अडान : सरकारले अध्यक्ष ओलीसँग सीधै वार्ता नगरेसम्म संसद खुल्दैन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद खुलाउने भए सरकारले आफूहरुसँग सीधा वार्ता गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि बाहिरिँदै एमाले सांसदहरुले सरकारले संवाद नै नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सिधा संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। भट्टराईले […]
रोकायाद्वारा माओवादी पार्टी परित्यागको घोषणा, एमाले प्रवेश गर्ने
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तत्कालिन पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश रोकायाले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफूले आजबाट माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन् । उनले माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरेका नीतिले पार्टीमा रहेर काम गर्न नसकिने निश्कर्ष सुनाउँदै पार्टी परित्याग गरेको जनाए । रोकायाले आफू नेकपा (एमाले) मा फर्कने […]
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलले संसद विघटन सही थियो भन्ने पार्टीको आधिकारिक मत भएको बताएका छन् । यद्यपि विघटन बेठीक थियो भन्ने मत पनि पार्टीमा रहेको उनले बताए । भोलिदेखि शुरु हुने विधान महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बादलले भने, ‘संसद विघटन सही थियो भन्ने पार्टीको निर्णय हो ।’
कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता गरि माओवादी बलियो पार्टी बन्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा जस्तै अझै पनि आफूहरूलाई घेरा हाल्ने काम भइरहेको बताएका छन्। पार्टीको प्रवास समन्वय समितिको भर्चुअल बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिले पार्टी र नेतृत्वलाई घेरा हाल्ने, अपमान गर्ने र एक्लाउने षड्यन्त्र विरुद्धको ब्याटल जितिएको बताए। उनले युद्ध जित्न भने बाँकी रहेको बताए। प्रचण्डले जनयुद्ध […]
जनयुद्धमा मारिएका सबैलाई सरकारले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले माओवादी युद्धमा मृत्युवरण गरेकाहरुलाई चाँडै राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न लागेको बताएका छन् । सरकारको हालै जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पहिलोपटक राज्यको तर्फबाट जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता र घाइतेलाई उपचार र राहत दिने विषयलाई दस्तावेजीकरण गरिएको भन्दै उनले सन्तोष व्यक्त गरे । माओवादीनिकट सहिद प्रतिष्ठान […]
एमसीसीका बारेमा गलत प्रचार गरिएको परराष्ट्रमन्त्री खड्काको टिप्पणी
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)बारे आफूले अमेरिकामा बोलेको कुरालाई गलत प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिएर बिहीबार नेपाल फर्कने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै खड्काले परियोजनाको बारेमा आफूले नबोलेको कुरा प्रचार गरिएको बताएका हुन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘२९ भदौं २०७४ मा हामीले सम्झौता […]
प्रचण्डको गुनासो : जनयुद्धमा जस्तै अझै हामीलाई घेराबन्दी गर्दैछन्
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजभोलि नै सरकार विस्तार हुन सक्ने बताएका छन्। सहिद प्रतिष्ठान नेपालको १२ औँ साधारण सभालाई काठमाडौंमा बिहिबार सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको अढाई महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन नसकेको बेला प्रचण्डले आजभोलि नै सबै कुरा टुंगिने बताए। ‘हामीले ऊर्जा र अर्थमन्त्रालय […]
क्रान्ति पूरा नहुँदा जनयुद्धका घाइते-अपाङ्गले राहत पाएनन् : प्रचण्ड
कपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रान्ति अपूरो भइदिँदा जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गले भने जस्तो राहत पाउन नसकेको बताएका छन्। सहिद प्रतिष्ठान नेपालको १२ औँ साधारण सभालाई काठमाडौंमा बिहिबार सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गलाई आफूले भने जति गर्न नसकेको पनि बताएका छन्। ‘जनयुद्धका घाइते-अपांगलाई राज्यका तर्फबाट जीविकाका लागि जति हुनुपर्ने थियो, […]
नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने ८० प्रतिशत नेता जेल जान्छन : चन्द्र भण्डारी
काठमाडौं । आठ दशक पाका नेताहरुले पुनः नेतृत्वमा दाबी गरेपछि नेपाली काँग्रेसको युवा पंक्ति आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा तिनै बूढा नेतालाई मार्गप्रशस्त गरिदिने मुडमा पुगेका छन् । काँग्रेसमा वैचारिक नेताको छवि बनाएका युवानेता चन्द्र भण्डारीले ‘१४ औँ महाधिवेशन संयुक्त,१५औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व’ भन्ने नारासहित आफू अघि बढेको बताए । नेकपा एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरुले […]
देउवालाई एमालेको जवाफ : माधव नेपाल सहभागी हुने सर्वदलीय बैठकमा हामी आउँदैनौं
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा आज बिहीबार बस्न लागेको सर्वदलीय बैठक नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको छ। आफूले अवैधानिक भनेको माधव नेपालसहित १४ जना सांसद तथा उनीहरूको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने भएकाले त्यस बैठकमा एमाले सहभागी नहुने एमाले स्रोतले जानकारी दियो। ‘माधव नेपालसहित १४ जना सांसद अनधिृकत हुन्, तिनले गठन गरेकाे नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैधानिक […]
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले अबको चुनाव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हार्ने र एमाले पार्टी नै पत्तासाफ हुने दाबी गरेका छन् । ‘अबको चुनावमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीका सांसदले एउटा पनि चुनाव क्षेत्र चित्न सक्दैनन्’, चौधरीले भने, ‘ओलीको लोकप्रियता शून्यमा झरेको छ । अबको चुनावमा ओली आफै चुनाव […]